Sida loola wadaago bartaada WhatsApp-ka waqtiga dhabta ah | Androidsis
Sida loola wadaago goobtaada WhatsApp
Eder Ferreño | | Khiyaamada Android, Whatsapp
WhatsApp waa mid ka mid ah barnaamijyada aan maalin kasta ugu isticmaalno Android. Marar badan, waxaan u isticmaalnaa inaan ku abaabulno shirar lala yeesho asxaabta ama qof gaar ah. Sidaa darteed, waxaa suurtagal ah in su'aal guud oo ka mid ah sheekaysigan ay tahay in qof na weydiiyo halka aan joogno. Waxaan kaga jawaabi karnaa qoraalka, laakiin sidoo kale la wadaag goobta.
Sidan oo kale, Qofkani wuxuu awoodi doonaa inuu arko khariidad muujineysa goobta saxda ah taas oo aynu ku suganahay xilligan. Marka waa howl la hubo inay daneynayaan dad badan oo isticmaala WhatsApp. Waxaan ku tuseynaa sida loo isticmaalo hoosta.
Si tan loo sameeyo, waxaan kaliya ku qasbanaan doonnaa geli sheekada WhatsApp ee aan qofkaas ku leenahay. Guji sanduuqa qoraalka ee ku yaal shaashadda hoose, halkaas oo aan ku qorayno fariinta. Halkaas, waa inaan gujino astaamaha 'clip clip' oo ku yaal dhinaca midig ee sanduuqa.
Marka, waxaan helnaa dhowr ikhtiyaar oo aan ka dooran karno. Mid ka mid ah xulashooyinka kiiskan waa Goobta, kaas oo ah midka ay tahay inaan gujino. Khariidad ayaa markaa la soo saari doonaa iyada oo si sax ah u qeexan, oo leh masaafad qalad ah oo 60 mitir ah, meesha aan joogno xilligaas. Markaas waa inaad gujisaa goobta dirista.
Marka qofkan waxaad ka arki kartaa khariidada sheekaysiga WhatsApp, meesha aan ku taaleyno. Marka, haddii aad na raadineysay ama aadan aqoon sidaad u timaadid meesha aan joogno, waxaad ku sameyn kartaa sidan sidan dhib la'aan. Sida aad u arki karto, waxaa loo soo bandhigay ikhtiyaar aad u faa'iido badan.
Shaqadani sidoo kale waa sax, maadaama ay jirto qol yar oo lagu khaldo goobta ay muujinayaan. Marka waad u diri kartaa dhammaan xiriirada aad rabto WhatsApp, markii loo baahdo, waxayna ku tusi doontaa goobta waqtiga dhabta ah dhib la'aan badan. Weligaa ma isticmaashay muuqaalkan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Whatsapp » Sida loola wadaago goobtaada WhatsApp
Sawirada dhabta ah ee la sheegayo ee OnePlus 7T Pro ayaa soo muuqda